Waxaa la saadaaliyey in Qanyare uu ku iilanayo dagaalka Muqdissho.
Buluugleey, May 25, 2006
Waxaa dhawaan la maqlayey is casilaad ka soo yeertay dhanka Qanyare, laakiin tafaasiir dheer ka dib waxaa la saadaaliyey in Qanyare uusan ka badbaadi doonin dagaalada Xamar oo casilaadu ay ka imaneyso xag kale.
Qanyare ayaa si wanaagsan ugu guuleystey in beelaha dega waqooyiga Muqdisho uu dagaal dhexdhigo. Dagaalkaas oo u geystey dadweynahaas qasaarooyin aan xisaab lahayn. Isdilka la dhexdhigay waxaa ka daran cadowtinimada diinta loo geystey iyo dadka u ehelka ah. Dagaalka lagu hayo diinta wuxuu gaaray heer loo adeegsaday dadweynaha hubka laga keenay Itoobiya, taas oo ah cadowga ugu weyn ee ay leeyihiin reer Muqdisho.
Qanyare guulihii uu ka soo hooyey waqooyiga Muqdisho ayuu u soo jeediyey dhinaca koofurta Muqdisho. Wuxuu qorsheeyey inuu dagaal ka dhex rido beelaha walaalaha ah ee degan koofurta Muqdisho. Dagaalka ka dhacay koofurta Muqdisho ayaa xoolo tiray taajiriintii Qanyare qasnada u heysey, kalana tegey guryahoodi fara marnaan. Qaasaraha ka dhashay dagaalkaas ayaa ah mid bilow ah, culaabtiisuna u sii dhaceyso dhanka Dayniile.
Dadweynaha degan koofurta Soomaliya ayaa intooda badan waxey ka soo horjeesteen isbaheysiga Qanyare oo la dagaalamaya diinta Islaamka. Waxaad moodaa caqligii madaxtinimada Qanyare oo ku shaqeynayey qaab hogaamiye koox buracada inuu ka shaqeyn waayey inuu dagaal ka dhex qarxiyo beelaha walaalahaa ee degan koofurta Muqdisho. Si aan kala har lahayn ayey dadweynaha degan koofurta Muqdisho ula dagaalameen madaxda calooshooda u shaqeystayaalka u soo dirsaday Qanyare iyaga oo aan loo eegin beesha ay ka soo jeedaan.
Koofurta Muqdisho ayaa horay loogu jebiyey ciidamada Mareykanka. Hadda oo dadweynuhu intii hore uu ka xoog badan yahay ayaa calooshooda u shaqeystayaal itaal daran oo uu soo kireystey Mareykanka ayaa isku dayaya meeshii shiikhoodu ku guuldareystay iney guul dagaal ka soo hooyaan si ay dhuuni ugu helaan dilka ay u geysanayaan dadka degan koofurta, islamarkaasna ay u fuliyaan ujeedada loo soo kireystey oo ah iney dadweynaha ka dumiyaan tiirarka iimaanka, nabada iyo nolosha ay ku heystaan degaankooda.
Qanyare ayaa shidaal u ah dagaalada Muqdisho, gurigiisana ka dhigay hoyga dagaalka laga soo abaabulo. Dagaalka ayaa u socda dhanka Dayniile, waxaana sadaal huban ay tilmaameysa inuusan sina uga badbaadeyn dagaalka ka dhacaya saldhigiisa.
Sadaashaas ayaa inta badan waxaa laga helay sirdoon shisheeye oo gacansaar la leh Qanyare, kuna dhiiriyey dagaalka uu hogaanka u qabtay ee lagu sii jeediyey inuu la gala culimada Soomaaliyeed. Inta badan siyaasada sirdoonka ayaa ku saleysan in la helo sabab lagu dilo madaxda ay adeegsadaan kadib marka ay natiijo gaaran ama ay u arkaan mid soo wada ceeb iyo guuldaro foolxun. Sababaha ay u cuskadaan dilka madaxdaas ayaa waxa ka mida iney cidleyaan marka u dagaalku marayo meel adag iyo iney isla kooxda ka abaabulaan shirqool qorsheysan oo si dadban loogu dilo nimanka magacaaban iyadoo abaabulka lagu xoojinayo qaab u muuqda kacdoon mid ku dhacay, kana dhashay isdabamarin lagu eedeynayo madaxda go’day. Qanyare ayaa u muuqda mid ay tirsan tahay maalmaha ka hartay noloshiisa, sida lagu helay sadaal lagu qiyaasayo inuu ku naf waayo dagaalada ka socda Dayniile.
Dhiiga laga dhex daadiyey walaalaha degen Waqooyiga iyo kan laga dhex daadiyey koofurta Muqdisho waa ay ka heshiinayaan goor ay noqotaba, laakiin masiibadu waxey ku danbeyneysaa Qanyare iyo hogaamiyeyaasha burcada ee u ku horkacayo nidaamka madaxtinimo tuug.